Vaovao farany Lingua volana Aprily 2018 · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 17 Mey 2018 4:28 GMT
Miarahaba ny rehetra! Ity ny mikasika ny Lingua volana Aprily 2018.
Tamin'ny fitambaran'io volana io, namoaka lahatsoratra 662 isika, nahasarika mpitsidika 319.084 ary jeripejy miisa 404.387. Nahatratra 265.463 ny mpankafy ny pejy Facebook iombonana Lingua, ary mpanjohy 274.820 tao amin'ny Twitter.
Namoaka ny fitadiavana ireo mpandika teny amin'ny fiteny Odia, Kiorda , Koreana , ary Khmer izahay. Miangavy anao mba hizara izany!
Jereo ireo fandikanteny be mpitsidika indrindra tamin'ny volana Aprily.
Nitsahatra tsy ho mpitantana ny Fandikanteny Lingua Portiogey intsony i Ricardo Ilton.
Toy ny isan-taona, nanambara ny fiaraha- miasanay amin'ny Meedan izahay handikana ny sioka RightsCon amin'ny teny Arabo, Frantsay, ary Espaniôla.
Velona ankehitriny ny teny Nubian, ny Lingua fanampiny farany!
Nanambara ny Lingua Portiogey fa namoaka ny Torolàlana amin'ny Fomba Portiogey izy ireo!
Nanoratra momba ny ” Efitra mihajan'ny fiteny “ i Guillem Belmar Viernes, mpandika teny vaovao amin'ny teny Catalá
Japanese Lingua attracted 70K visits this month, thanks to the translation of “Randram-pomba fijery Twitter sy fotoana tsy ampoizina ao Japan nalaza haingana“
Nahasarika mpitsidika miisa 70.000 tamin'ity volana ity ny Lingua Japoney noho ny fandikanteny ny lahatsoratra “
Randram-pomba fijery Twitter sy fotoana tsy ampoizina ao Japan nalaza haingana“
Shinoa T. 17.421
Misaotra anareo ry Lingua ! Misaotra anareo fa zava-dehibe ho an'ny GV inareo! Ianareo no mahery indrindra 🙂